यो समयमा भुलेर पनि दान नगर्नुस् यी कुरा ! « Sanatan Online
यो समयमा भुलेर पनि दान नगर्नुस् यी कुरा !
प्रकाशित मिति : १ मंसिर २०७७, सोमबार ११:२२
काठमाडौं । मनिसहरुको जीवनमा जति सुख हुन्छ त्यति नै दुःख पनि भईरहेको नै हुन्छ । त्यसैलो पनि होला सुख र दुःखलाई जीवनको साथी भनेर भन्ने गरिन्छ ।
सुख र दुःख भन्ने कुरा जीवनमा आउँने जाने क्रम भईनै रहन्छ । मानिसहरु जीवनमा सुखी छन् भने केहिको पनि परवाह राख्दैनन् तर दुःखी छन् भने हरेक उपायहरु खेज्न थाल्छन् । दुःख कटाउनको लागि उनीहरु दान धर्म पनि गर्न थाल्छन् ।तर के तपाईलाई दान कुन बेला गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ ? भनिन्छ दान गर्ने कुनै समय हुँदैन ।
यो कुरा सत्य पनि किनभने पुण्य गर्न कुनै साइत हेरिरहनु पर्दैन । तर दान गर्ने समय भने पक्कै हुन्छ । कुन समयमा दान गर्दा धेरै पुण्य कमाइन्छ भन्ने बारे जान्नुपर्छ ।किनभने गलत समयमा गलत दान गर्नाले हाम्रो स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ । धर्मशास्त्रका अनुसार सूर्य अस्ताएपछि दान गर्ननहुने कुरा धर्म शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
हामीले सूर्य अस्ताएपछि दान गर्न हुँदैन भनेको कुरा सुनेका नै छौँ । साथै पैसा साँझमा दान गर्न नहुने भनेर भनेको पनि सुन्ने गरेको नै होलाउँ । साँझमा पैसा कसैलाई दिँदा घरकी लक्ष्मी वा श्री तथा यशहरु पैसासँगै जाने विश्वास गरिन्छ ।
२. लशुन तथा प्याज
सूर्य अस्ताएपछि लशुन तथा प्याज दान गनुृ हुँदैन । हिन्दु धर्म शास्त्रका अनुसार यसको सम्बन्ध केतु ग्रहसँग जोडिएको छ । केतु ग्रह नकारात्मक शक्तिहरुको स्वामी मानिन्छ । सूर्य अस्ताएपछि जादू टुनाहरु गर्ने बेला मान्ने भएको कारणले त्यो बेलामा लशुन तथा प्याज दान गर्न हुँदैन ।
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार बिहिवारका दिन हल्दी कसैलाई दिनु हुँदैन । शास्त्रका अनुसार यदि गुरुवार हल्दी कसैलाई दान गर्याे अथवा दियो भने आफ्नो भाग्य कुणडलीको गुरुग्रह कमजोर हुन्छ । विहिबारका दिन हल्दी दान गर्नाले समस्याहरु बढ्दै जान्छन् ।